Qubanaha » Siyaasiyiin caan oo Dadaal ugu jira Khilaaf ka dhex abuurma Farmaajo iyo Kheyre
Siyaasiyiin caan oo Dadaal ugu jira Khilaaf ka dhex abuurma Farmaajo iyo Kheyre
Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay qubanaha.net ayaa xaqiijinaya in Siyaasiyiin caan ah Xisbiyo siyaasadeed ay wadaan Olole balaaran oo ay ku doonayaan in Khilaaf ay ka dhex abuuraan Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha.
Siyaasiyiintaasi oo aan la shaacin Magacaooda ayaa la tilmaamay in ujeedadoodu tahay inay uga faa’iidaystaan marka khilaaf abuurmo inay timaado fursado siyaasadeed oo ay kuraas ku helaan.
Xisbiga Daljir ayaa la tilmaamay in dhankooda ay Dhaqaale badan ku bixinayaan in la faafiyo Dacaayad abuuri kara Khilaaf siyaasadeed, waxaan inta Badan Siyaasiyiinta ka tirsan Xisbiga Daljir ay ka soo jeedaan Beesha Hawiye ee uu ka dhashay RW Kheyre.
Dhinaca kale Siyaasiyiinta ka tirsan Dam-jadiid ayaa dhankooda qayb weyn ka Ciyaaraya hurinta Khilaaf dhex mara Madaxweyne Farmaajo iyo RW Kheyre si hamiga Shacabka iyo Waxqabadka Dawladda loo Dumiyo.
Waa Markii ugu horeysay ee la isku dayo in Khilaaf laga dhex abuuro Madaxweyne Farmaajo iyo RW Kheyre.